के रक्सीले जाडो हटाउँछ ? « Drishti News – Nepalese News Portal
के रक्सीले जाडो हटाउँछ ?
२५ मंसिर २०७८, शनिबार 10:35 am
काठमाडौं । जाडो मौसममा सामान्य मानिसलाई पनि विभिन्न प्रकारका रोगहरु देखिने गर्छन । छाला चिलाउँने, खुख्खापन आउँने, घाउँ खटिरा देखा पर्ने समस्याहरु देखिने गर्छन ।
यो समयमा खानपानका ध्यान दिन जरुरी छ । जाडोमा विशेषत खान पर्ने भनेको झोलिलो खाना हो। शरीरमा नुन पोटासको मात्राहरू कमी भइरहेको हुन्छ त्यसलाई सन्तुलन गर्न झोलिलो कुराहरू,सुप र पानी खानुपर्छ। चिसो पानी भन्दा पनि मनतातो पानी खानु शरीरका लागि फाइदाजनक हुन्छ।
सामान्य खाने कुराहरूमा जे पनि खान सकिन्छ। कुनै विशेष किसिमको व्यथा छ भने खानेकुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ। जस्तै बाथको बिरामीले प्रोटिन भएको खाना थोरै खानुपर्छ।
जाडोमा जथाभावी औषधि खानु हुँदैन अहिले छ्यापछ्याप्ती औषधि पसलहरू छन्। जहाँ सजिलै सामान्य रोगको औषधि किन्न पाइन्छ। यो एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण पाटो हो। हुन त सामान्य मानिसलाई जहाँ पायो त्यहीँ औषधि किन्न सजिलो लाग्छ।
कतिपन मानिसहरुलाई रक्सी सेवन गरे जाडो भाग्छ भन्ने भ्रम छ । यो कारण कतिपय मानिसले बेलुका अत्याधिक रक्सी सेवन गरेर सुत्ने गरेको कुरा सुनाउँनु हुन्छ ।
हामीले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल नगरिकन आफुखुसी हामीले हाम्रो शरीर चलाइरहेका हुन्छौं। आफ्नो शरीरले कति थेग्ने,कति नथेग्ने भन्ने पनि हुन्छ। रक्सी खानै हुँदैन भन्ने होइन। मुटुका रोगीहरूले समेत ६० एमएल सम्म रक्सी खान सकिन्छ भन्ने विश्वव्यापी रूपमै स्थापित छ। तर रक्सी खाँदैमा तातो हुने भन्नेमा कुनै सत्यता छैन। रक्सी खाएपछि त्यसको नशाले हामीलाई बाहिरको वातावरण थाहा हुँदैन,जसले गर्दाखेरि रक्सी खानेहरूलाई आफूलाई तातो भएजस्तो भएको हो। नशाले ट्रिप दिँदासम्म त्यस्तो हुने हो।
समाज आधुनिक भएसँगै हामी अर्काको धेरै देखासिकी गर्छौं। बिहान हिँड्नु एउटा फेसन जस्तै भएको छ। यसमा बुझ्नपर्ने कुरा के छ भने,यदि दीर्घ रोग दम मुटु उच्च रक्तचापको औषधि लिनेहरू लागेको मानिस छ भने सबेरै बिहान र राति हिँड्नु हुँदैन।